Juan Mata oo ciyaari kara kulanka final-ka League Cup, inkastoo uusan ka mid ahayn xiddigii Man United ee u safray magaalada London – Gool FM
Juan Mata oo ciyaari kara kulanka final-ka League Cup, inkastoo uusan ka mid ahayn xiddigii Man United ee u safray magaalada London
Haaruun Yuusuf February 25, 2017
(London) 26 Feb 2017 – Laacibka khadka dhexe ee Red Devils Juan Mata ayaan ka mid ahayn xiddigii kooxdiisa Man United ee u safray magaalada London, laakiin diyaar ayuu noqon doonaa kulanka final-ka EFL Cup ee habeen dambe ka dhici doona garoonka Wembley, kaasoo ay kooxdiisu la yeelan doonto naadiga Southampton.
Juan Mata ayaa ku biiri doona kooxdiisa Manchester United ee gaartay magaalada London kaddib markii uu ka qeyb galay aaska awoowihiis, sida ay xaqiijisay shabakadda ciyaaraha ee Goal.com.
Wal-wal ayaa soo wajahay taageerayaasha Man United, kaddib markii Mata laga waayey sawiraddii laga qaaday xiddigaha Man United ee u safray magaalada London, waxaana la filayey inuu seegi doono kulanka final-ka EFL Cup.
Si kastaba ha ahaatee, Mata kaasoo 9 gool u dhaliyey tartammada oo dhan kooxdiisa Red Devils xilli ciyaareedkan ayaa diyaar noqon doona waqtiga tartanka.
Man United ayaan heli doonin kulankan adeegga laacibkeeda Henrikh Mkhitaryan, laakiin Michael Carrick ayaa diyaar u ah kooxda Jose Mourinho, halka Wayne Rooney uu ka mid noqon doono safka Man United ee kulankaas.
Red Devils ayaa indhaha ku haysa inay koobkoodii labaad ku guuleystaan xilli ciyaareedkan, kaddib markii ay 2-1 kooxda Leicester City kaga qaadeen koobka Community Shield bishii Agoosto.
Kaddib markii uu 300 oo kulan maanta saftay Fabregas, waa kuwee xiddigaha reer Spain ee ugu safashada badan horyaalka Premier League? + SAWIRRO
Cesc Fabregas oo noqday laacibka labaad ee ugu caawinta badan Premier League iyo tababare Conte oo ammaanay